Kukhona inkolelo yokuthi abaqambi besayithi badinga kuphela izingane zesikole, futhi noma iyiphi inkampani ehloniphayo izosheshe ifune "umlimi ojwayelekile". Kodwa cabanga ngokuyisisekelo: uma kunjalo, kungani lezi zinsizakalo zikhona (futhi uthele izimali ezinkulu ezikhangisweni nokuthuthukisa ukusebenza okusha)?
Ungamangala uma ufunda ukuthi bangaki osomabhizinisi be-Inthanethi basebenzisa amasayithi ayenziwe ezinsukwini ezingu-1-2. Futhi namhlanje sikulungiselele ukuhlaziywa okufutheka komunye wabathandwa kakhulu ku-RuNet abaklami - Nethouse. Ukubuyekezwa mayelana nale nsizakalo kuqhubeka ngokuxhuma emanethiwekhi omphakathi nakwimibuthano eqondile - kokubili okuhle nokubi.
Ngakho ngubani olungile? Kuyiqiniso kangakanani ukwenza indawo ephumelelayo yebhizinisi ngosizo lomklami? Ukuze uphendule le mibuzo, qala uzame ukuthola ukuthi yini esibhekene nayo nhlobo.
Indlela iNethouse eya ngayo izindawo ezingu-800,000 eminyakeni engu-6
Ngisho nosuku lokuqalisa - 11/11/11 - luyabonakala ngokwalo. Ngenkathi izwe lonke lenza izifiso, abathuthukisi beNethouse abazange bahlale bodwa, futhi bafaka imibono yabo empeleni.
Umthombo wokuphefumulelwa kwethimba kwaba ... amanethiwekhi omphakathi. Uma ufake i-avatar entsha "VKontakte" ingaba ukuchofoza okungu-2, ke kungani wenza njalo umsebenzisi ukuba akhuphukele endaweni yomqondisi ukushintsha isithombe kusayithi lakho siqu?
Lefilosofi nayo yaba yisisekelo sokudala iNethouse.ru. Ukubuyekezwa kwabasebenzisi bokuqala kwaqeda ukungabaza - nakuba ngesikhathi sokuqaliswa ku-niche esivele isungulwe kahle "ama-dinosaurs" njengeCoz noWebasyst, insizakalo encane yadiliza ngokushesha kwi-TOP.
Iyini inzuzo enkulu yeprojekthi ye-Nethouse? Umakhi wesayithi ulula futhi, eqinisweni, yakhelwe ukwenza ngokushesha ipulatifomu encane yokuthuthukiswa kwebhizinisi kuwebhu. Ubheka i-trite? Ngicabanga kanjalo. Kodwa ngokushesha uya esigabeni esilandelayo - thola amaklayenti wangempela kunokuba uhhafu wonyaka ujabule ngamafonti.
Ukuze wenze lokhu, isiteji sinikwe amandla ezinsizakalo ezimbalwa ezipholile ngempela. Ake sibone?
Ukushintsha ikheli elisezingeni elilodwa le-clumsy ku-sonorous engcono kakhulu kungcono ngokushesha. Ngo-2015, iNethouse inobhalisi bayo - domains.net.net.ru. Izibuyekezo ziningi kakhulu, nakuba zikhona ezimbi, ikakhulukazi kulabo abathintekayo ekukhangiseni i-.ru kanye ne-.rf yama-ruble angu-49, kodwa abazange bakhathazeke okungenani ukukhipha izimo nezidingo.
Yini ethakazelisayo mayelana nensizakalo? Abathuthukisi baye bazama ukwenza lula ngangokunokwenzeka ukukhethwa kwegama elifanele. Izinketho ezithandwayo zingathunyelwa ezindaweni ezingu-150 ezihlukene, okungahle zihlelwe zibe yizigaba.
Ethebhu elilandelayo uzothola isitolo sesizinda esiphelele. Ingabe uvilapha ukuza negama? Bese uqiniseke ukuthi uhlola lesi sigaba. Okukhethwayo kuyamangalisa - okungaphezu kuka-1500 okukhethwa kukho, kufaka phakathi ukusetshenziswa (nomlando kanye ne-TCI) kanye nezizinda ze-premium. Ukuhlunga ngezigaba, izindikimba kanye nentengo kuhle kucatshangwe kahle.
Ukuba ne-SEO-ofisi yakho ingenye yezinzuzo ezinkulu ze-Nethouse. Ukubuyekezwa kwamakhasimende kanye nezibalo zamanje akushiya ngokungangabazi ukuthi labafana bayazi ibhizinisi labo futhi bakhuthaza ngempumelelo amasayithi kunoma yiziphi izitsha. Futhi, ngokungafani nama-freelancers, "ama-SEO" awo awazi wonke ama-nuances omsebenzi "ku-Nethouse."
Yini enye? Okokuqala, umsebenzi uqhutshwa masinyane emigqeni emibili - ngokuhambisana ne-SEO, ungahle ulandise ukukhangisa kokuqukethwe, okuletha imiphumela ngokushesha.
Okwesibili, kuye ngezinhloso kanye nesabelomali, ungakhetha inketho elula - ukuhleleka ngezinsizakalo ezihlukene (ukuhlola, ukusetha, ukubhala imibhalo, njll) noma ukukhuthazwa okuyinkimbinkimbi ngenkokhelo yenyanga.
Ngendlela, insizakalo inikeza isiqiniseko esingu-100% - uma emva kwezinyanga ezingu-4-6 zemiphumela ngeke kube khona, uzobuyisela yonke imali esetshenzisiwe.
Yonke i-CMS ebaluleke kakhulu inesithangami, futhi iNethouse ayikho into ehlukile. Kodwa abathuthukisi banqume ukuletha ukuxhumana komsebenzisi ezingeni elisha futhi badala uhlobo lwe-hybrid ye-freelancing ne-social networking, lapho ungathola khona iseluleko noma uthole isonkontileka kwanoma yimuphi umsebenzi. Lapha awuchithe isikhathi ngesikhathi sokukhukhula, kodwa ngokushesha usetshenziswe kumuntu olungele ukusiza embuzweni wakho.
Ngendlela, noma yimuphi umsebenzisi we-Nethouse angaba yi-Agent futhi azuze imali. Umklami uvumela ukudala ipulatifomu elula yokwethulwa kwezinsizakalo zakhe. Kunamaphesenti amabili kuphela - anganikeli nge-SEO (ngoba le nkampani inomsebenzi ohlukile) futhi isebenza kuphela ngaphakathi kohlaka lwesiteji.
Futhi lokhu kuyithokoqobo yangempela kulabo abazimisele kakhulu ukwenza ibhizinisi le-intanethi. Abadali bazama ukuhlanganisa zonke izihloko eziyinhloko ezihlobene nokudala, ukukhushulwa nokukhangisa kwesayithi kwenkambo eyodwa.
Mhlawumbe ngeke ube yi-SEO noma umqambi, kodwa nakanjani kubiza - hhayi kuphela labo abazokwenza amasayithi ku-Nethouse. Impendulo kule phrojekthi iningi kakhulu. Kwabaningi, wasiza "ukubeka yonke into emashalofini" futhi uqonde ukuthi yini nokuthi ungayenza kanjani ukuthi isayithi lenze imali.
Inkambo iqukethe ama-webinars angu-15. Konke okufakiwe kuyatholakala ngokukhululekile kusayithi. Kodwa uma ufuna ukuthola ulwazi olujulile, kufanelekile ukubhalisa ekuqeqeshweni "okuseduze" okuseduze.
Futhi yebo - akukhululekile ngokuphelele. Kuyini ukudoba? Yebo, akukho lutho. Ngenkampani, lokhu kungumthombo wamakhasimende amasha. Futhi ngisho nalabo abaqhubeka phambili ekutadisheni ukukhangisa kwe-Inthanethi, akunakwenzeka ukuba bafune ukwenza konke ngokwabo. Futhi obani okufanele babanikeze ibhizinisi, bangabi kanjani othisha babo?
Yiziphi abasebenzisi abanjengoNethouse
Ngakho sathola "okumnandi" kakhulu - sebenzisa nomklami. Ukuze sibone isithombe esikhulu, asihlolanga kuphela ukubuyekezwa okuhlobene ne-Nethouse kuwebhu, kodwa sazama ngisho nokwenza iwebhusayithi encane. Okokuqala mayelana namandla. Yini elula inkonzo?
Ukubhaliswa ngeminithi elingu-1
Konke okudingeka uqalise ukuza negama lesayithi bese ufaka idatha yakho. Emva kwalokho, ungakwazi ukungena ngokushesha endaweni yokuphatha, ukhethe umklamo bese uqala ukugcwalisa, awudingi ukuxhuma nokulungisa noma yini.
Uthole ngokuzenzakalelayo isizinda samahhala ngesakhiwo sesayithi (isibonelo, optmytoys.nethouse.ru). Ukubuyekeza okuvela kwi-intanethi kungahle kudideke, kodwa konke kuvele endaweni. Ingabe kufanele ngishintshe?
Kuze kube ngu-2015, amakheli "amahle" adingekayo kuphela ukwenza isayithi libukeke liqinile. Kodwa ngemuva kokwethulwa kombhalisi wayo, iNethouse yaqala ukucindezelwa kubanikazi bezizinda zamahhala. Abakwazi ukuqinisekisa amalungelo abo kusayithi noma, isibonelo, ukuxhuma i- Google Analytics neYandex.Metrics. Futhi izikhathi ezinjalo ezingathandeki eziningi. Ukuze uqale uzivikele kulokhu, kungcono ukuthenga isizinda sezinga lesi-2 ngesikhathi sokuqala.
Sula indawo yomqondisi
Ayikho imisebenzi "efihliwe", ngakho-ke nomuntu ohamba naye wesihlanu uzokwazi ukuthola izilungiselelo ezidingekayo. Ukuphatha ama-oda, ukuxhuma amasevisi angeziwe, ukudala ama-imeyli-imeyili namanye amathuluzi atholakala ngokuchofoza okukodwa. Ungakwazi ukuvula ngokushesha isayithi - kumodi yokuhlela noma njenge-isivakashi evamile.
Kukhona konke ukuqhuba isitolo se-intanethi
Ngenguqulo yamahhala kukhona umkhawulo - kuze kube yimikhiqizo engu-1000. Ungangeza amakhadi amasha ngesandla noma ungenise ikhathalogu kwifomethi ye-CSV. Isicelo kulula ukwenza ngokwezifiso - ukudala amakhodi wokuphromotha, usethe ubukhulu bomyalelo omncane, uchaze amasimu wefomu kanye nombhalo wezinhlamvu.
Ukwaziswa mayelana nawo wonke ama-oda nesimo sabo kugcinwa ku-database eyodwa, okukwenza kube lula ukulawula umsebenzi wesitolo. Futhi emva kokukhokha i-akhawunti ye-premium, uzokwazi ukuthola izinkokhelo ze-intanethi ngeYandex.Kassu.
Ungakwazi ukuxhuma izinhlelo zokusebenza ezidumile
Ukuzikhethela kuncane, kodwa ku-100% okuthenjelwe, okuqinisekisiwe, nokubaluleke kakhulu - izinsizakalo ezifanele. Ngaphezu kwalokho okuku-skrini, ungaxhuma i-Google Tag Manager, i-UniSender (isevisi yokuposa eyithuthukisiwe), i-CallbackHunter (isiza "ukucindezela" isivakashi, ngesikhathi esifanele ukuyiqondisa kumnyango wokuthengisa) nabanye.
Izinsiza eziningi ezengeziwe
Kulesi sigaba, awukwazi ukuxhuma kuphela intela yebhizinisi, kodwa futhi uhlele izinsizakalo ezengeziwe ezihlobene nokudalwa nokukhuthazwa kwemithombo (indawo yokuhlola / ukukhangisa, imibhalo yokubhala, ukuthola izaziso ze-SMS, njll).
Uhlelo lomlingani oluhle kakhulu
Okokuqala, akudingeki ukuba uzibuze ukuthi ungamkholisa kanjani umuntu ukuba abhalise - bonke abasebenzisi abamenyiwe bayothola ama-ruble angu-300. Ngezindleko. Inzuzo ibonakala, kodwa awulahlekelwa lutho. Futhi okwesibili - uzothola njalo u-30% wezindleko zazo zonke izinsizakalo ezizokhokha kuzo.
Intengo eyanele yokuhamba kwebhizinisi
Ngokwezinga, inyanga eyodwa yi-ruble angu-299. Kodwa ungakwazi ukukhipha i-akhawunti ekhokhelwayo ngokushesha ezinyangeni ezingu-3, eyodwa noma emibili bese uthole isaphulelo kuze kube ngu-25%. Ungakwazi ukuxhuma intela yesikhathi esiphezulu ngama ruble angu-5400 kuphela.
Kulula ukudlulisela isayithi lakho lakudala ku-Nethouse
Uma usuvele unesisetshenziswa sokusebenza, kodwa ngesizathu esithile unqume ukushintsha isayithi, lokhu kungenziwa ngamaminithi ambalwa nje. Inzuzo enkulu, akunjalo?
E-Nethouse kunezixazululo cishe noma yiliphi isayithi - amakhadi ebhizinisi, izitolo ezise-intanethi, ikhasi lokufika, izinkulumo. Ngokuklanywa, azikho ama-frills, kodwa zonke izinketho zibukeka zihle futhi zanamuhla.
Yengeza ngokushesha bese ususa amakhasi
Konke kwenzeka nakanjani kumhleli obukwayo. Ngezansi kukhona uhlu lwamabhuloki alungele ukuxhuma.
Futhi kukhona ithuba lokudala noma yikuphi amakhasi e-static - ucabanga ngokuqukethwe kwawo futhi udide ngokwakho. Kuhleliwe wamenyu kunamathempulethi amaningana okwenziwe okwenziwe ngezigaba ezijwayelekile, njenge "Ukuthunyelwa", "Ukukhokha", "Ukubuyekeza", "Oxhumene nabo" nabanye.
Izingxenye ezingadingekile kulula ukususa noma ukufihla, nokusebenzisa imicibisholo yokuphakama / phansi - shintsha ukulandelana kwamabhuloki ekhasini.
Akudingeki ukwazi izinhlelo ngisho ne-HTML
Ukuhlela nokugcwalisa isayithi kwenziwa ngomgomo ofanayo. Cishe zonke izichazelo ezichaza umklami we-Nethouse ukubuyekezwa ziqinisekisa - kulula. Ake sithi ufuna ukushicilela i-athikili ebhulogi. Konke okudingeka ukwenze ukuthola i-block oyifunayo bese uchofoza inkinobho ethi "Engeza". Ngokushesha ngemva kwalokho, umhleli uzovulwa.
Kuthebhu ethi "Hlela" kukhona zonke izilungiselelo zesigaba esithile - incazelo, amathegi we-SEO, uhlu lwamakhasi (isibonelo, izihloko noma amasevisi), njll.
Yiziphi abasebenzisi abangazithandi
Siyaqhubeka sihlaziya izibuyekezo ezinikezwe kuNethouse. Izinkinga zesevisi zivela ezinsukwini zokuqala. Kodwa kubaluleke kangakanani? Sizozama ukuphendula lo mbuzo.
Awukwazi ukuxhuma izinhlelo zakho zokusebenza
Kungakhululekile kakhulu kulabo abazimisele ukushintshela kwezinye izingosi ku-Nethouse. Impendulo iphinda ikhombise ukuthi izinsizakalo ezinikezwa uhlelo ngokwayo azivami ngokwanele.
Amanani amaningi ngokwezinsizakalo ezithile
Isibonelo, kuzodingeka ukhokhe cishe ama-ruble angu-1000 ukuze umane ususe umbhalo othi "Nethouse - Iwebhusayithi Yomakhi" ngezansi kwekhasi. Futhi okufanayo kufanelekile ukudala i-LP ngokuthengisa umbhalo, ihluzo kanye nazo zonke izilungiselelo.
Ukuze ufunde mayelana nama-oda amasha, ukuphawula, njll, ungakwazi kuphela nge-imeyli noma nge-SMS. Ku-panel panel ngokwayo, azikho izaziso nhlobo. Abasebenzisi abaningi abathandi.
Ama-templates ambalwa kakhulu namaprosesa amabili afanelekayo
Eqinisweni, unezinketho ezingu-5 kuphela, ngisho nasenguqulweni ekhokhelwayo, futhi konke okunye kwehla ukukhetha uhlelo lombala. Kodwa akukubi kakhulu. Kodwa ukungabi khona kwezihumusho zeselula kuyinkinga ngempela. Kwenzeka kanjani lokhu ngo-2017?
Ayikwazi ukufinyelela i-HTML
Ngokuvamile. Ngokuyinhloko, lena yifilosofi yesevisi: "Nethouse" ngumakhi womakhi walabo abafuni ukuqonda amakhodi. Kodwa kuyadabukisa ukuthi i-HTML ayikho ngisho nakumhleli wombhalo, lapho idingeka khona ngempela. Ngakho-ke, ulungiselele ukuthi izithombe ezisezincwadini zizogxuma, futhi wenze umbhalo ongezansi, isibonelo, njalo uma udinga ukushintsha usayizi wefonti bese ugcizelela isigaba ngokugqamile (SEO? Kuyini i-SEO?).
Kulula ukushintsha ukubukeka kwamabhuloki
Kukhona kuphela izinketho zokuklama zokubangela kanye ne-counter yesitoreji, futhi wenze ngokwezifiso umklamo wakho - lo mkhuba onzima. Okuphezulu ukuthi umklami ngokwakhe uzinikeza ukwandisa noma ukunciphisa ukubuka kuqala kwezithombe nokushintsha kancane ukubukeka kombhalo. Awukwazi ukukhetha umbala wakho wenkinobho (ngaphandle kokulungele), noma ukushintsha ifonti, noma ukushintsha ifomethi yokubonisa yezimpahla.
Service Primitive Mailing Service
Ukuze ubone ukuthi le ncwadi izoboniswa kanjani ngaphambi kokuthumela, akunakwenzeka, futhi eminye yemisebenzi isebenza ngephutha. Isibonelo, umzamo wethu wokuqala wokwenza i-newsletter ibheke into enjengale.
Kuvela ukuthi i-centering ayisebenzi nemifanekiso, futhi uma usayidinga - kuzodingeka uhlupheke ngezindleko. Umzamo wesibili wawuphumelele kancane, nakuba isithombe sisasuswa, futhi isikhathi esiphakathi kwezigaba asikho.
Kodwa ngokujwayelekile, isithombe asikashintshi. Izikripthi zokwenza ngezifiso (imikhonzo ngamagama) nokudala ukuthunyelwa ngeposi ngokuzenzakalelayo nazo azikho. Njengokwazi ukwenza ngezifiso uhlu lwakho lomamukeli noma i-corny yokwenza izifanekiso ze-imeyli. Ukuze uthole ukumaketha kwe-e-mail okugcwele lokhu akusobala ngokwanele.
Amasampula wesampula ku-Nethouse
Thola izinsizakalo zekhwalithi ephezulu akulula. Iningi lamasayithi adalwe ngabantu kude nebhizinisi le-intanethi. Futhi kungakhathaliseki ukuthi i-"Nethouse" elula kangakanani, umklami akakwazi ukuza nesistimu yokuhamba noma amaphepha agcwalise nge okuqukethwe kwekhwalithi esikhundleni somsebenzisi.
Futhi nasi izibonelo ezimbalwa ezifakazela: 95% womphumela kuxhomeke ekusebenziseni kwakho amathuluzi atholakalayo.
Isikhungo sokuzijabulisa "I-Aquamarine" (kotka-tur.nethouse.ru) - ukubuyekezwa nokuhlaziywa
Isayithi lekhadi lebhizinisi elilula emaminithini angu-5. Ngokungaqondile, iphrojekthi ibuthakathaka kuzo zonke izici, futhi ulwazi olubalulekile alukwazi ukuthola. Kodwa yikuphi okunye? Okungenani, kukhona imenyu eyanele, isigaba esithi "Oxhumene nabo" ngebalazwe, futhi umbhalo "awunqamuli" futhi ngokuvamile ubukeka uhle.
Ezimweni eziningi, lokhu usemncane kakhulu noma ukuhlola indawo, okuyinto engazange ngisho ziqondakala izinjini.
inkampani Ukuhweba "vertex" (verteks-fin.nethouse.ru) - ukubuyekezwa kanye nokuhlaziywa
Enye iphrojekthi, senziwa isimiso esifanayo. Uma lokho - inikeza ngamasevisi umsebenzi e-Finland (ngasizathu simbe, iningi isikhala elalihlala banner nge amawolintshi kanye nobhasikidi nemifino esikhundleni logo, ngakho-ke kunzima ukuqagela).
Kodwa izibalo emangalisayo ukusho okungenani. Njengoba sazi ukuthi izinsiza cishe hhayi ngokobungako izinjini futhi akukhulunywa kwi website esemthethweni Nethouse, khona nje isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu. Futhi akusiwona ukuhwebelana okungahleliwe - umuntu uchitha esayithini mayelana imizuzu engu-15, okuyinto enhle kakhulu. Kodwa lapho enza traffic? Kuze kube manje, into kuphela ungakwazi ukubamba - izixhumanisi kumasayithi lapho "vertex" ishicilela sikhala.
Design studio IntergaDesign
Manje bheka lesi sikrini. Uyabona umehluko? Isitayela esifanayo, umbala omuhle, umbukwane design amabhlogo ... Ngiyavuma, kubukeka elikhulu. Yilokhu okwenzekayo uma abaklami professional zisebenzisa Umklami Nethouse amasayithi. abanikazi Izibuyekezo studio zingatholakala emsamo main.
IntergaDesign isebenzisa ukusebenza uhlelo esiphezulu. In the main kukhona isinciphisi nge ukusebenza okungcono nezixhumanisi case izifundo, lwazi kumasevisi, izinzuzo studio icuphe format yokubonga evela kumakhasimende ngisho iphothifoliyo (izithombe). Okuwukuphela negative - block kancane welulela ukwelashwa ikhanda.
Njengoba indawo osemusha, waya isiqala nje ukuhambisa in the yelucwaningo, nakuba Dynamics omuhle lubonakale kakade. Kukhona khona encane, kodwa njalo futhi iphakethe umxhwele ukubuyekezwa.
Amaswidi esitolo e-US naseYurophu - SweetBit
Phambi kwethu - stylish and umsebenzisi-friendly isitolo inthanethi imikhiqizo confectionery. Yiqiniso Excellent - ingabonisi isinciphisi "Ungadla" ezithakazelisayo kakhulu futhi wenze izinkinobho ukuya lwemibhalo. It akazange ukudanisa nokuma Amakhasi static - konke okuhle ihluzo ikhwalithi ubone ukuthi indaba ihlelwe.
Kodwa into enkulu - abakhiqizi lwemibhalo, ngoba isifanekiso esiphelele ngoba iyunithi efana lapho, futhi onjiniyela kufanele zihlanganisa fantasy. Uma kuyathakazelisa - ke luyasetshenziswa ngokusebenzisa sombhalo ensimini. Engeza izithombe .PNG, linqume indentation, bese ukwaba ngayinye ngayinye sanyathela izinkomba tigaba ikhathalogi.
Izinkomba kukhona neze, kepha isevisi eba. Annoying wukuthi izivakashi beze ngokushesha kakhulu, kodwa ngenxa yokuthi indawo in the gallery "Nethausa". Lokhu kusho ukuthi ingxenye enkulu traffic owenziwa yilabo nje iza ukuhlola design.
I-Web Studio IdenStudio
Futhi esinye iphrojekthi ezithakazelisayo imithombo yendalo "Nethaus". Umklami ezandleni abaklami professional nokuthuthuka ithimba ungakha indawo epholile ngempela. Nokho, siyobe ukweluleka esikhundleni isithombe banner ekhaya kokuthile ethambile. Ngakho-ke, sinikeza phansi nje ngezansi, block, "About Us."
Ngiyavuma, isitayela izithonjana nokuqukethwe kuthintwa. Amakhasi Portfolio futhi zibukeka zizinhle, kodwa zidalwe kusetshenziswa ezivamile flip-flops. Konke ngifuna ukweluleka wena - musa faka amalinki kanye zalinkovat project iziqu.
Futhi ekugcineni, sibheke le umhlaziyi. Lapha ukuxoxa, ngokuvamile, akukho - cishe, guys ufuna amakhasimende kweminye imithombo, futhi lokhu isetshenziswa njengesethulo platform.
Uhlolojikelele kwaba voluminous kakhulu, kodwa siye sazama ukuba sihlaziye konke - amathuba Nethouse, izimo zangempela, ukubuyekezwa emihle nemibi. By endleleni, uma usunayo iwebhusayithi usethe ngumuntu http://nethouse.ru, ukubuyekezwa kanye nakho kuyoba usizo kakhulu kwabanye abasebenzisi.
Ibalazwe-ukudala ke silula!
Platform Mahhala ngokudala amasayithi: uhlu emihle nemibi
Kanjani futhi kuphi imfundo ephakeme emva ekolishi?
Imibukiso ezifana "Gossip Girl": Yini ukubona?
Ama-headphone Razer Kraken: Ukubuyekeza nempendulo. Razer - ama-headphone nge-microphone
Kukuyiphi sezulu esihlukahlukene Australia? Australia: sezulu, izingxenye zezulu nezindawo
UKUZE-2: uhlu imisebenzi kule moto PERIODICITY zabo
Sibhedlela "Cherche", Ivano-Frankivsk esifundeni: incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
"Gormel": imfundo manual, ukubuyekezwa kanye analogue